Inona no Waterproofer tsara indrindra ho an'ny palitao? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Famonoana rano ho an'ny palitao tsara indrindra - boky torolalana feno
Famonoana rano ho an'ny palitao tsara indrindra - boky torolalana feno
Inona no Waterproofer tsara indrindra ho an'ny palitao?
nyWaterproofing tsara indrindraprice
Rust-Oleum NeverWettsy tantera-dranoMitifitra.
Nikwax TX. Directtsy tantera-dranoMitifitra.
Simple Shine Premiumtsy tantera-dranoMitifitra.
Fandavana fampisehoana Grangerstsy tantera-dranoMitifitra.
303 Mpiambina lambatsy tantera-dranoMitifitra.
Uh, faly mihaona aminao. Mahamenatra izany.
Na izany na tsy izany, niverina tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiniko kely aho nanao fanamboarana sy fikolokoloana ny fitaovako ary androany dia hanadio sy hamerina handrehitra ireo palitao Gore-Tex-ko aho. Raha Gore-Tex amin'ny maha fitaovana azy dia tsy tantera-drano sy mifoka rivotra, ny fonosana ety ivelany dia DWR na fananana famonoana rano maharitra. Izany dia mahatonga ny rano hisintona ny tampon'ny palitao ary, rehefa mandeha ny fotoana, dia mahatonga ny DWR ho simba.
Avy eo ianao mila mamelombelona indray na mamelombelona na mamerina mamorona azy indray. Ka, izay ihany. Manao an'io isika anio.
Raha mijery ny palitaoko tena milamina ianao dia hitanao fa rehefa manondraka rano eo amboniny aho dia perla kely fotsiny ary oh, somary voarotsaka ihany izy io, saingy eny, karazana voahangy fotsiny matetika. Mihodina toy izany koa. Hitanao ve izany? Jereo ity vakana ity.
Ary avy eo manana palitao tsy dia milamina isika. Ity no palitaon'ny namako. Tsy dia tiany loatra ny fitaovany toa ahy.
hetsika bisikileta 2021
Midika izany. Azoko antoka fa manao izany izy. Raha manafotra an'ity palitao ity ianao dia hitanao fa mahazo perla isika, fa handroboka be koa ao anaty palitao.
Ka amin'ny oram-be dia hanondraka ny rendrika ary hanao tsara kokoa ianao. Okay, tsara, ity no ilainao! Aza mampiasa detergent fanasan-damba mahazatra, fa mampiasa detergent tsy misy mpanadio amin'ny palitaoninao ary manana iray amin'izy ireo aho eto. Manana ny Nikwax Tech Wash aho. (Maneno ny lakolosy) Ka tena misy mpanadio vitsivitsy ao amin'ny tranonkalan'ny REI azonao atao ny manafatra sy mampiasa azy ireo hanadiovana ny palitao tsy tantera-drano, saingy ity ihany no ampiasaiko.
Io ilay nampiasako hatrizay. Ity no fanasana teknolojia ampiasaina hanadiovana ny akanjo. Amin'ny tranga sasany dia ampy ity ho toy ny fitsaboana mba hampiomanana ny palitao tsy tantin'ny rano na palitao Gore-Tex hampiasaina indray.
Saingy amin'ny tranga maro dia tsara ny mametaka ny DWR fotsiny, ity no Nixwax TX Direct Wash-In. (Lakolosy maneno) Misy koa TX Direct Spray-on izay tsara raha manana akanjo vita amin'ny insulated na zavatra misy kofehy mamono hamandoana ao anatiny ianao, toy ny microfleece na zavatra hafa. Fa satria izy roa dia palitao mahazatra ihany, dia hanasa ao an-trano izahay.
Ny ampahany milay indrindra dia miaraka amin'ny palitao ry zareo. (mihomehy) Jereo izany! Izay rehetra kasaina. Raha azo atao, raha manana tasy maloto eo amin'ny palitao ianao, dia azonao atao ny mampiasa an'io detergent io ao anaty lovia kely misy lamba ary avy eo ampiasaina azy io handotoana ilay palitao, raha ny marina, ary avy eo alemana na anaovana prewash.
bisikileta bass ampiasaina
Tsy manana tasy maloto manokana amin'ity palitao ity aho ka tsy hanao izany. Tsara, okay, andao isika hankany amin'ny efitrano fanasan-damba. Eny ary, eto isika ao amin'ny efitranoko lamba malaso, ary hanasa palitao aho.
Araka ny hitanao dia manana milina fanasan-damba ambony aho. Ka raisiko ny palitao roa dia ataoko ao anaty masiniko. Mampiasà kaontenera detergent ianao avy eo tianao ho azo antoka fa afaka detergent tanteraka satria tsy tianao hapetraka ao anaty palitao izany.
Ary avy eo ny dingana manaraka dia ny milina fanasan-damba miaraka amin'ny rano alohan'ny handehanako ary ampio ny mpanadio ahy, ho azonay antoka fa ho mavesatra eto izany, ary avy eo hataontsika mafana loatra loatra ity. Hametraka satroka telo amin'ireo ao amin'ny masiniko aho. Saron-doha iray sy roa ary telo.
30 minitra eo ho eo vao hosasana tanana, avy eo hiverina isika ka hodiovintsika. (Miantso ny famantaranandro) Eny ary, eto indray isika ao amin'ny efitrano fanasan-damba ary vao avy nanasa ny akanjoko. Madio daholo izy rehetra.
mpivarotra salama salama
Izahay izao dia manasa fanasana faharoa ary mampiasa ny fanasananay TX Direct ary afaka mandeha mankany amin'ny mpanasa lamba avy eo aorian'ny fanaovana ny Tech Wash. Tsy mila maina ny palitao eo anelanelany, izay tsara. Mitovy fihetsika amin'izany.
Eo amin'ny tavoahangy eto, sao hadinonao. Mandroso ary manomboka ny milina mavesatra sy mafana. Avelao hanomboka ny famenoana. (Ranon-drano) Tsy avelako hameno azy hatrany ilay izy satria matahotra aho fa hosaronan'ny fonony aho, nefa misy rano ao.
Eny, atsipintsika ao io. Ary eny, ny tavoahangy iray manontolo. Ary lasa izahay! (Rano ny rano) Atao ao anatin'ny 30 minitra izany ary avy eo dia ho maina isika.
Tena ahantoniko ho maina ireo, fa azonao atao ny mampidina azy amin'ny maripana ambany. (Miantso ny famantaranandro) Hataoko maina izy ireo. Mahatalanjona.
Ka andro vitsy lasa izay no namelomako indray sy namonoako ny palitao ary efa vonona ho an'ny orana daholo izao, mba ho hitanao fa be ny voloko. Tsara kely. Andao hojerentsika ny palitao an'i Sky.
Izy no nokarakaraina tsy dia tsara loatra. Jereo! Maina tokoa, eny! Beady. Hooray tantera-drano! Eny, karakarao ny fitaovanao.
Mitandrema, miarova tena. (Alika mikorontana) Andriamanitra ô, korontana izany. (mihomehy)
Ahoana no ahafahako manao ny palitaoko tsy ho tantera-drano?
MADIOpalitaomiaraka amin'ny Pro Cleaner na Down Cleaner araka ny voamarika ao amin'ny torolàlana Wash-In etsy ambony.
Mihantona lena na mainapalitaoamin'ny hanger. Ahintsano tsara.
Mitifitra 5-10 avy amin'nypalitaoamin'ny faritra misy rivotra tsara. Asio malalaka amin'ny faritra misy akanjo ambony toy ny soroka sy cuffs.
Zahao ny torolàlana momba ny fikarakaran'ny mpanamboatra alohan'ny fanamainana ny masinina.
viagra sy fanatanjahan-tena
Inona no tantera-drano tsara indrindra ho an'ny akanjo?
Inona no azoko esorina amin'ny lamba mba tsy ho tantera-drano?
Raha mbola mamaky ireo marika alohan'ny handraisana andraikitra ianao dia tokony ho salama tsara.
Repoblikan-drano mavesatra ho an'ny Kiwi Camp.
Fandavana ny fampisehoana nataon'i GrangerTsy tantera-dranoMitifitra.
Sof Sole Heavy Didy SiliconeWaterproofer.
Scotchgard Mpiaro ny adiresin'ny rano.
ForceField ProtectorTsy tantera-dranoMitifitra.
anio dia hasehoko anao ny fomba miaina fiainana vaovao anaty kitapo taloha mampalahelo izay miorina amin'ny ralph toy ny gony taloha, ny zavatra hitanao dia manjavona mafy noho ny masoandro ary malemy sy tsy manana aina intsony ireo famaohana mandra-pahoviana no nanananao azy ireo ao amin'ny oh dia tokony ho nandritra ny dimy taona izao dia tena tsara izy ireo ary tany ivelany foana izy ireo tao anaty elanelan'ny orana sy ny masoandro dia tany ivelany izy ireo dia tsy misy rano ary tsy tena izy ireo fa hanome anao fotsiny hevitra ny halehiben'ny lasa alehany, jereo ange fa nanao an'izany ianao tamin'ny loko tsy misy ralph dia aza adala izany fa tsara vaovao raha manana vaovao vitsivitsy ianao, maninona ianao no mandoko tsara ireo taloha ralph i manana fitsipika rehefa mividy zavatra tsara aho dia mividy iray hafa foana fa satria dimy taona lasa izay dia hadinoko fa nanana azy ireo aho, zazalahy adala ianao na izany aza, hampiasa an'ity loko vita amin'ny fingotra mahafinaritra ity izahay avy amin'ny zq no fomba itenenanao fa tsy misy hevitra ralph angamba tsy marika maro hafa no azo antoka ihany koa ralphyes voalohany tsy forge t ny manaova sarontava, solomaso ary fonon-tanana aloha, ny kitapo misy fako taloha mba hanomezana azy endrika ny toetr'andro fotsiny oh eny ity asa ity no tsara indrindra any ivelany satria cellulosic ny loko ary maimbo mifidy andro iray tsy misy orana mazava ho azy ary tsio-drivotra malefaka tsy maninona fa ny rivotra dia azo antoka fa tsia satria hitondra ny loko rehetra hiala ny asany izy io. Aza adino ny manidy sy manarona ny zipera rehetra satria raha tsy izany dia tsy hisokatra intsony izy ireo, raha ny marina dia misaotra betsaka, tokony hanozongozona mafy ny vatan-doko koa ianao mandritra ny minitra vitsivitsy alohan'ny hanombohanao miasa eny nataoko fa alohan'ny nanombohantsika tamin'ny lahatsoratra, dia tokony ho manify kely ilay sosona voalohany mba hahafahan'ny loko mandoko ao amin'ilay fitaovana, aza manarona ny tadiny voalohany amin'ilay izy, ahoana ny famafazana rehefa nanandrana famafazana farany aho zavatra azoko tamin'ny tena taloha messrunen n'aiza n'aiza, tsy dia tsara amin'izany aho ary ho be ny matihanina hihomehy ahy fa misy ny fitsipika tena lehibe rehefa manosika ny noza ianao dia tokony ho hitan'ny tananao ianao afaka mahita mihetsika tsy tapaka ny tanako rehefa mivoaka ny loko raha tsy mihetsika ianao dia miloko be loatra amin'ny faritra iray ary avy eo mahazo mihazakazaka ianao inona no tianao holazaina ary aza mandoko ny vava fidirana ny velarana fidirana no fanokafana ny paosy ametrahanao ny zavatra rehefa mandoko ianao dia mety hahatonga azy diffi fivavahana mba hametraka zavatra ao am-paosinao avy eo ity dia loko vita amin'ny fingotra ary mahatonga ny zavatra tena mahasosotra tena mahafinaritra tokoa ny mahita ny fomba nanjavonan'ny zavatra mahatsiravina rehetra tao ambanin'ny loko eny ary izany fotsiny no palitao voaloko voalohany fa maivana be loatra ary tsy ataontsika akory andramo ny mandrakotra ny zava-drehetra ity loko vita amin'ny fingotra ity dia tsara, manana toetra be famelan-keloka izy ary tsy lafo izany. Nandoa folo dolara teo ho eo ho an'ny kapoaka roa 400 mil aho ary nilanja iray litatra isaky ny kitapo, izany dia karatra manify sy fonosana matevina ary misy fikitika hitako nahita lahatsoratra vitsivitsy tao amin'ny YouTube izay nandokoan'ny olona ny Wholecar eny, iray hafa zavatra lehibe momba an'ity loko ity dia raha mandoko vy ianao ary manao hadisoana dia azonao esorina ilay izy ary andramo indray, tsy azonao atao izany amin'ny fitaovana na zavatra ataontsika izay hiraikitra toy ny lakaoly, okay ka ndao hitady fotsiny ny ampahany mety tsy azontsika ary avelao ho maina mandritra ny 10 na 15 minitra hoy ao amin'ny canokay izao dia ho lasa matevina kokoa ny kaody faharoa izao ezahantsika hofenoina ny zava-drehetra mba ho azo antoka fa mihetsika ny tananao rehefa manidy ny fehy eo amin'ny panniers dia manamora kokoa ny fivezivezena eny izay ho lasa asa tena mora heveriko fa misy olona afaka manao izany dia manome anao gazy fotsiny ianao hevitra ratsy ralph tsy tianay hitohy mandrakizay fa tsara kokoa izany ary hitanao fa napetrako tamin'ny matevina tokoa izy io ary nandoko azy ary tsy olana ho an'ny th izany e pen at alloh vao avy nitantara tantara hoso-doko aho, mpanao hosodoko ilay namako ary nanandrana nitondra loko vita amin'ny litera 5 litatra izy ho any amin'ny firenena hafa ao aminy, ao anaty valizy.
Nisokatra ny loko ary lany ny valony tao anaty kitapony. Inona no tsara vitany, te hiala fotsiny izy toa tsy ny kitapony fa misy ny anarany eo io ka nesoriny ny carousel ary nentiny tany amin'ny trano fidiovana ary nanandrana nanadio ny lalan'ny itupa? Nanaraka azy tany amin'ny toeram-pivoahana i Paint, oh, nofy ratsy izany, ka nataony tao anaty harona plastika daholo ny akanjony satria simba izy ireo ary nanandrana nanadio ny tenany tamin'ny taratasy fidiovana fa maina ny loko ka izay niraikitra taminy dia voasambotra izy tsy nisy nandresy ny polisy ' Aza avela handeha fa mieritreritra ny miloko amin'ny fanamiany izy ireo, tahiry ny loko hafa aorian'izay, aza avela handefa ny kapoaka, mila miala tsiny ianao noho ny fanararaotana nataon'ireo olona ka avelao ho maina ny kitapo mandritra ny 15 na 20 minitra ary izao isika mitady faritra fotsiny izay mety ho faritra manify kely ny loko mety tsy nojerentsika isika ary mikasika fotsiny amin'ny ankapobeny dia manao sarontava ianao nefa tsy mitazona ny fofonaiko aho fa nilentika lalina anaty rano ho an'ny voahangy dia nianaranay ny fomba fofonaina maharitra minitra Na ahoana na ahoana, tsio-drivotra mahafinaritra izay manaisotra ny loko amiko, eny eny, azoko tsara ny tianao holazaina, hendry ianao, saingy tsy tarehy tsara tarehy fotsiny ianao fantatrao fa mandao fotsiny isika fampahatsiahivana ny tsy handoko ny saron-kafarana fidirana dia ho sarotra ny mahazo azy io ary mivoaka ny kitapo raha manao an'ity tsara ity aho dia heveriko fa efa ho ary tsy dia manana loko firy isika izao ka aleo atsangana mba ho maina ary avelao mandritra ny alina mba hamelana ilay loko hositranina hiverina any anaty lamba ilay vatana fa mbola malefaka Ny iray amin'ireo kitapo dia tena ratsy endrika, saingy ho hitanao ny nanjanonan'ny fanaintainana ny loko vita amin'ny fingotra mandriaka tsara, ka mandrosoa, eo amin'ny bisikileta ianao ary mieritreritra fa tsara be ry zareo justini dia mieritreritra fa mahavariana tokoa ry zareo fomba izay nandehanan'ny sary famantarana bridgestone teo, eny, maninona no fantatry ny rehetra fa manao tendrily shitty mora vidy i Bridgestone. Fitaovana fanoherana ny halatra io, tsy hisy hangalatra Bridgestone ho famoretana tsara eto. Na izany aza, misy Strongsqueeze tsara lasakanana ary ho avy oh eny mamirapiratra izy io tena mandaitra oh wow tena hafahafa daholo daholo, misaotra anao nijery ny lahatsoratra voalohany nataonao ho anao fa nahafinaritra anao izany ary hitanao fa mahasoa tokoa azafady, toy ny fizarana tsy fankasitrahana ny fisoratana anarana. ralph mihaino amin'ny youtube milalao prima donnayou fantatro fa tsy misy mijery ilay lahatsoratra hatramin'ny farany
Misy palitao tsy misy rano ve?
Tena kelypalitaotena marinatsy tantera-drano. ' Betsaka ny mahatohitra orana, izany hoe hihazona izy ireonytide nandritra ny fotoana lava. Farany,nyny safidy amin'ny teti-bola matetikatsy tantera-dranonofafazana. 'Izanymandaitra, faizanyafaka mihalefy tsikelikely, 'hoy i Tezcan nanoro hevitra.29.10.2020
Azonao atao ve ny manefy palitao hanaovana azy tsy ho tantera-drano?
nyrano vita amin'ny rano tsy madioAmpio hananatra nypalitaohanamafisana nytsy tantera-dranosy breathability. Manasa foana nyakanjoVOALOHANYRAHAfanaporofoana indray mampiasa atsifotra tsy misy rano. Maloto sy solikaafakamanentsina ny fonontselon'ny fofonaina hita amin'ny maropalitao tsy tantera-drano,kevitratoy ny hoe mitsofoka ao anaty lamba ilay rano.
ianao ve no tokony hanoro mekanika
Fa maninona no mando ao anaty ny palitao ranonorana?
condensationmitranga ny etona avy amin'ny rano dia mifanena amin'ny tampon'ny mangatsiaka kokoa ary miova avy amin'ny endrika etona lasa lasa iray. Raha ny ivelany ivelany an'nypalitao oranamangatsiatsiaka noho izyanatiny, ny etona ao anaty rano dia hanentsina nyanatinynypalitaoary manaova ny fitafianaofahavaratra.
Ahoana no ahafahanao mitafy palitao nylon?
Raiso nypalitaoivelany ary mijoroa amin'ny rivotra ao ivohonao. Mitifitra kelytsy tantera-dranofamafazana amin'ny faritra tsy hita maso an'nypalitao. Atsofohy moramora amin'ny lamba fotsy madio ilay faritra nofafazana ary jereo raha misy loko avy aopalitaotonga eo amin'ny lamba.
Inona no tsara indrindra tantera-drano vita amin'ny lamba rongony?
nytsara indrindrafitsaboana acryliclambadia vokatra miorina amin'ny fluoropolymer. Ity karazana fitsaboana ity dia mifanaraka amin'ny famaranana tany am-boalohany, ary manome valiny tsara sy maharitra. Ny seha-drano izay manana fiara miorina amin'ny solika dia nampisehotsara kokoafampisehoana amin'ny acryliclambanoho ny fitsaboana amin'ny rano.
Miasa ve ny famonoana rano?
Ny vaovao tsara dia ianaoafaka re-tsy tantera-dranony fitafianao ary manalava ny androm-piainany.indray-tsy tantera-dranodia lafo ihany koa. Ny hany ilainao dia tavoahangy fanasitranana DWR izay vidiny ambany noho ny $ 20. DWR dia miantoka fa ny fitafianao tsy mandray rano, fa araky ny anarany dia arovy izy.12.28.2018
Inona no fomba tsara indrindra hanaovana palitao?
Misy fomba vitsivitsy tsy itetezana ny palitao, fa ny mora indrindra hatreto dia ny mampiasa «spray» tsy tantera-drano. 1. Nikwax TX.Direct Spray-On Waterproofing mivantana Raha mitady fahamendrehana amin'ny tsifotra tsy misy rano ianao dia mandehana miaraka amin'i Nikwax.
Iza no palitao tantera-drano tsara indrindra eny an-tsena?
Ireo mpamokatra palitao tsy tantera-drano dia tsy mandray maivana ity takiana ity - manome toky izy ireo fa ny vokatr'izy ireo dia manome ny mpanjifa haavo avo lenta azo atao. Ireto misy, araka ny hevitray manetry tena, ny tsara indrindra any: Jacket Minimalist Marmot; Palitao avy any ivelany mikaroka palitao orana; Palitao REI Co-op Drypoint GTX; Palitao orana Arc'teryx Zeta SL
Mila palitao tsy misy rano ve ianao raha handeha hitsangatsangana?
Ny palitao tsy tantera-drano dia entana fitsangantsanganana ilaina. Na palitao tsy misy aforitra na poncho, raha sanatria sendra mandro, na ny palitao azo antoka azo itokisana entinao miaraka aminao isaky ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina dia mila mikarakara azy ireo ianao.